Football Khabar » फुटबल खेलेर मेस्सी र रोनाल्डोले एक घन्टामा कति कमाउँछन् ? पत्याउनै मुस्किल !
फुटबल खेलेर मेस्सी र रोनाल्डोले एक घन्टामा कति कमाउँछन् ? पत्याउनै मुस्किल !
विश्व फुटबलका दुई चर्चित फुटबलर लिओनल मेस्सी र पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले वार्षिक कति कमाइ गर्लान् ? मासिक कति होला ? दैनिक कति होला ? अनि प्रतिघन्टा कति होला ?
थाहा नहुनेले यदि पहिलोपटक उनीहरूको कमाइ थहा पायो भने अवश्य पनि जीब्रो टोक्नेछन् । स्पेनिस बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने अर्जेन्टिनाका मेस्सीले एक घन्टामा ५ हजार युरो कमाइ गर्छन् । यो नेपाली रुपैयाँ हालको अवस्थामा ६ लाख ३२ हुजार हुन्छ ।
यस हिसाबले हेर्दा मेस्सीले एक वर्षमा कूल ४ करोड युरो कमाइ गर्छन् । यसको नेपाली रुपैयाँ ५ अर्ब ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
यस्तै, हाल इटालियन युभेन्टसबाट खेलिरहेका पोर्चुगलका रोनाल्डोले एक घन्टामा ३ हजार ८ सय युरो कमाइ गर्छन् । उनको एक घन्टाको कमाइ नेपाली रपैयाँ ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुन्छ । रोनाल्डोले एक वर्षमा ३ करोड १० लाख कमाइ गर्छन् । उनको वार्षिक कमाइ नेपाली रुपैयाँ ३ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
यसरी हेर्दा मेस्सीले आफ्ना खास प्रतिस्पर्धी रोनाल्डोको भन्दा प्रतिघन्टा १ हजार २ सय युरो बढी कमा गर्छन् । यो नेपाली रुपैयाँ १ लाख ५१ हजार हुन्छ ।
हेर्नुस् तस्बिरमा :
प्रकाशित मिति ८ मंसिर २०७६, आईतवार १९:३८